Ny vy matevina vita amin'ny vy matevina dia vita amin'ny metaly metaly tena tsara (diametatra marina amin'ny micrometer) amin'ny alàlan'ny fametahana tsy fahana, ny fanenitra ary ny fantsom-pahalemana avo lenta. Ny tsiranoka vy tsy miovaova dia tsapa fa misy gradients isan-karazany noforonin'ny lay miforitra samy hafa, izay afaka mifehy ny fametrahana ny filtration avo sy ny fahafahan'ny mitazona loto feno loto. Misy ny toetra mampiavaka ny savaivony telo santimetatra, ny volon-koditra, ny porosiana avo, ny faritra ambony be, ny fizarana porefy ny habetsaky ny habeny, sns ... dia afaka mitohy hatrany ny fihenan-dàlana fanivanan-ny haben'ilay sivana. Noho ny firafitra sy ny toetrany etsy ambony, ny vy matevina tsy voatanisa dia tsapa fa mahomby amin'ny fahalemen'ny metaly vy izay mora sakanana sy marefo ary afaka mamorona noho ny fahalemen'ny vokatra sivana vovoka izay marefo ary misy mikoriana kely. Ny toetra mampiavaka ny fanoherana ny mari-pana sy ny fanoherana ny tsindry izay tsy mety mifanentana ny taratasy sivana sy ny lamba fanenonana. Noho izany, ny vy vy tsy voatanisa dia tsapa fa fitaovana fanivanana mety amin'ny fanoherana ny mari-pana, ny fanoherana ny fanapahana ary ny fametrahana azy tsara
Mivarina vy vita amin'ny mason-tsivana vaovao dia karazana lozisialy vaovao manana tanjaka mekanika avo sy rafi-pandrefesana amin'ny ankapobeny, izay vita amin'ny vy vita amin'ny metaly multilayer amin'ny alàlan'ny fanodinana lamination manokana sy ny fanodinana ny vakoka. Ny mesh isaky ny takelaka tariby tariby dia miforona mba hamorona rafitra fanamboarana fanamiana sy mety tsara, izay tsy maharesy fotsiny ny tsy fahalemena ny tanjaka ambany, ny fahatsentsenana marefo ary ny endrika tsy miorina amin'ny vatan'ny tariby iraisana, fa mety ihany koa fa mifanandrify ary mamolavola ny haben'ny pore. fahatokian-kery sy tanjaka mampiavaka ny fitaovana, hany ka manana fitandremana tsara ny sivana, ny fanivanana ny sivana, ny herin'entana ary ny fanoherana Ny toetra mivaingana momba ny fikosoham-bary, ny fanoherana ny hafanana ary ny fanodinana dia mazava ho azy fa tsara kokoa noho ny karazan-tsolika hafa toy ny vovoka vita amin'ny vy vita amin'ny vy, seramika. fibre, lamba fanenona, taratasy fanivanana, sns.
Amin'ny ankapobeny dia rafitry ny takelaka dimy izy io, izay mizara ho efatra: ny fiarovana ny sosona, ny sivana, ny fisarahana ary ny fisaka fanohanana. Ity fitaovana fanivana ity dia tsy vitan'ny hoe mahitsy fanamafisana sy maharitra ny fanivanana, fa koa ny tanjaka sy ny fahatokiana. Izy io dia fitaovana fanivanana mety indrindra rehefa avo be ny fepetra takian'ny herin'ny compressive sy ny sivana granularity.
Noho ny mekanika filamatry ny masony sy ny fantsom-bolo malefaka, dia manana fampisehoana fanavaozana tsara ny backwash ary azo ampiasaina imbetsaka mandritra ny fotoana maharitra, indrindra izay ilaina amin'ny fizotran'ny fanaingoana maharitra sy mandeha ho azy, izay tsy azo ampitahaina amin'ny fitaovana sivana.
Ny fitaovana vita amin'ny marika nanota dia mora noforonina, zahana ary hotsimbadika, ary azo vinavina amin'ny endrika fanivanana samihafa, toy ny boribory, cylindrical, conical, corrugated
Fantsona varahina simika matevina
Ny vovony vy vita amin'ny vovoka vy vita amin'ny vy vita amin'ny vy vita amin'ny vy vita amin'ny bobongolo, vita amin'ny mari-pana avo ary miorim-paka. Izy io dia manana tombony amin'ny tanjaky mekanika avo, fanoherana ny hafanana, ny fanoherana tsara, ny fizarana pirazom-bolo mitovy habe, ny fikojakojana ny rivotra, ny fanadiovana sy ny fananganana indray, ny fanodinana mekanika ny milina lasantsy, sns. azo atao ny mahitsy amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny haben'ny sombin-javatra sy ny lafiny teknolojia amin'ny vovony. Noho ny tombony azo avy amin'ny fitaovana miova vovoka vy malemy, ity karazana vokatra ity dia ampiasaina betsaka amin'ny famerenan'ny katalisma, filtrehana etona entona ary fisarahana eo amin'ny sehatry ny indostria simika, fanafody, zava-pisotro, sakafo, metallurgie, petrolika, fametrahana ny fiarovana ny tontolo iainana, sns. .; fanesorana vovoka, fitrandrahana, fanesorana solika ny gazy isan-karazany sy setroka; fihenan'ny tabataba, famoretana, lelafo, sns
Fahatsapan'i Fe Cr izay manana fiainana maharitra, fiarovana ny tontolo iainana sy fitahirizana angovo, fanoherana ny mari-pana, fanoherana ny fiovaovana, tsy misy ny fandroahana karbônina, fahasosorana, mamatotra, ny fanaparitahana ny haben'ny seranan-tsambo, ary ny tena avo be sy ny fanoherana ny fandotoana. Ampiasaina be dia be amin'ny fikarakarana lasantsy eo amin'ny fiara, fandoroana, fanodinana boiler, famelomana rivotra, fikosoham-bary, famonosana sakafo, lafaoro, fanafanana, indostrian-drindrina, fananganana orinasa, indostrian-dry zareo, indostrian'ny fanalana vovoka avo lenta sy indostria hafa.
Amin'ny maha-fitaovana sivana sy fanadiovana azy, ny andiany fanadiovana Fe Cr al fibre sintering tsapa dia ampiasaina amin'ny indostria simika ary fitaovana famoahana ny diesel amin'ny fenitra Euro 4. Ny rafitry ny porous ny Ni Cr Al alloy dia ny tambajotra tambajotra telo-dimensional. Ny haben'ny seranan-tsoavaly dia 0.1mm ary ny por poria dia 85%, izay safidy tsara indrindra ho an'ny fitaovana entin'ny mpandrafitra catrier iray.
Ny fahatsapana an-tsokosoko miaro tena dia karazana fahatsiarovan-tena, izay vita amin'ny metaly metaly tena tsara amin'ny alàlan'ny fametrahana tsy natao haran-doha, ary avy eo amin'ny alàlan'ny fanalam-baraka sy ny fiakaran'ny hafanana. Amin'ny ankapobeny, dia amin'ny alàlan'ny fametrahan-tariby varahina matevina amin'ny tsikombakomba mahazatra no tsapa taorian'ny fandriana, ary avy eo manota amin'ny hafanana avo. Araka ny fangatahan'ny mpanjifa, ny fahatsapana an-tsitrapo amin'ny harato fiarovana dia azo zaraina ho mpanamory harato tokana azo tsapain-tanana ary mahatsapa fatratra ny fiarovana amin'ny harato.
310S tsapan'ny nanota dia manana fiainam-panompoana lava, fiarovana ny tontolo iainana ary famonjena ny angovo, fanoherana ny mari-pana, ny fanoherana ny fiovaovana, tsy misy ny fandroahana karbônina, ny fahatsoran-dàlana, ny mamatotra, ny fizarana ny habetsaky ny valan'aretina, ary ny tena avo be sy ny fanoherana ny fandotoana. Ampiasaina be amin'ny burner, fanodinana boiler, fametrahana rivotra, famonosana fitaratra, famonoana sakafo, lafaoro, hafanana, indostrian'ny taratasy fanitso, orinasa fanamainana, indostrian'ny vovoka ary angovo hafa.